About Us - Shandong Chen Lu zvokurapa co. LTD
Shandong Chen Lu zvokurapa chiridzwa co., LTD. Riri yakaisvonaka kumahombekombe guta zai, riri boka chete hurumende zvokudya uye zvinodhaka Kutarisirwa Nokubvumira dzakagadzirirwa iri mubasa zvokurapa, maindasitiri munda X-ray unodzivirira zvokushandisa, midziyo yokutsvakurudza uye kukura, kugadzirwa uye rokutengesa kuti kudyidzana pakati yepamusorosoro Enterprises. Pakati pavo, national bvumidzwa (bvumidzwa zl2014205451262), iyo vakazvimiririra yakatanga, anogona kuderedza kunzwa kuda vakasununguka radiological inodzivirira zvipfeko muchipatara.
boka redu achange vanobatisisa "kutendeseka ndiyo nheyo chivimbo, unhu ndiko kunobva zvebhizimisi" musimboti, anoedza kuti apone kubudikidza quality, tsvakai kukura nokuda zvesainzi, vanhu vaifarira, kuramba kuvandudza chigadzirwa quality, kugutsa zvinodiwa rokushandisa. With yepamusoro zvinhu uye chakakwana pashure-okutengesa basa kukunda vatengi. Tichakurukura mumaoko muruoko kuti dzakafara negurumwandira vatengi uye navatengesi kuti pave mangwana nani. Welcome vatengi zvose uye navatengesi vanodana kana tsamba kubvunza.